राष्ट्रिय सभा सांसद कोमल ओलीले प्रहरीले गायिका आस्था राउतलाई थुनामा राखेर अधिकारको दुरुपयोग गरेको बताएकी छिन्।
मंगलबार राष्ट्रिय सभामा गायिका आस्था राउत पक्राउको विषयलाई उठाउँदै सांसदले ओलीले भनिन्, ‘एउटा सामान्य भनाभन भएको घटनालाई लिएर चार दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने अनुमति दिनु गलत हो।’
उनले घटना हेर्दा सामान्य देखिएकाले सामान्य तारिखमा बोलाएर राउतलाई सोधपुछ गर्न सकिने बताइन्। ‘घटना हेर्दा गम्भिर फौजदारी अपराध जस्तो लाग्दैन। फौजदारी सिद्धान्तले पहिले सुन्ने अनि थुन्ने भन्छ। त्यसैले गलत ढंगले कानूनको दुरुपयोग भएको छ,’ उनले भनिन्।
उनले गायिका राउत र महिला प्रहरी जवानबीच सामान्य भनाभन भएको र राउतबाट कानूनले निषेध गरेको कुनै कुरा नभएको दाबी गरिन्। उनले राउतले ठूलो स्वर र अलिकति रिसाए पनि कुनै गालि गलौज र अपशब्द नबोलेको बताइन्।
‘तारिखमा राखेर सोधपुछ पनि गर्न सकिन्थ्यो। तर भित्रै थुन्ने कुराले त्यसमा बदनियत छ भन्ने कुरा देखिन्छ,’ सांसद ओलीले भनिन्।
गायिका आस्था राउत भने सोमबार बेलुकी नै त्रिपुरेश्वरस्थित ब्लु क्रस अस्पतालमा भर्ना भएकी छिन्।
राउतको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अस्पतालमा भर्ना गरिएको काठमाडौं महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रवक्ता होविन्द्र बोगटीले बताए।
‘हिजो बेलुका पेट दुख्ने अनि तनाव भएपछि उनलाई अस्पताल लगिएको थियो,’ बोगटीले सेतोपाटीसँग भने।
सोमबार नै राउतलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले अभद्र व्यवहारको मुद्दामा चार दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो।
माघ १ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रहरी जवान रमिता श्रेष्ठमाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोप राउतमाथि छ। श्रेष्ठले जाहेरी दिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले माघ ५ गते राउतविरूद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो।
आफूमाथि दुर्व्यवहार गरेको भन्दै विमानस्थलमा कार्यरत महिला प्रहरीले जाहेरी दिएपछि राउतविरूद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको थियो।
राउत आइतबार आफैं अभिभावकसँग महानगरीय प्रहरी परिसर पुगेकी थिइन्।
गायिका राउत सरकारी वकिलको कार्यालयमा
प्रहरी हिरासतमा रहेकी गायिका आस्था राउतलाई सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा उपस्थित गराइएको छ ।
गायिका राउतलाई केहीबेरअघि सरकारी वकिलको कार्यालयमा उपस्थित गराइएको हो ।
राउतलाई सोमबार बिहान प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि सरकारी वकिलको कार्यालय लगिएको थियो ।
त्यसपछि उनलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौले ४ दिन थुनामा राखेर प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो ।
सोमबार साँझ ८ बजेसम्म काठमाडौ त्रिपुरेश्वरस्थित ब्लु क्रस अस्पताल लगिएको थियो ।
आस्था राउतलाई आजै रिहा गर्न नेकपा नेताहरुको दबाव !
गायिका आस्था राउतलाई ४ दिन हिरासतमा राख्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको निर्णयको सामाजिक सञ्जालमा विरोध भइरहेको छ। नेकपाका नेता तथा सांसदहरुले आस्थालाई प्रक्रिया पूरा गरेर मंगलबार नै रिहा गर्न दबावसमेत दिएका छन्।
‘डन सांसद’लाई ३ दिनमै उन्मुक्ति, गायिकालाई ४ दिन थुना ?
नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले सामाजिक सञ्जालमार्फत आस्था राउतमाथि प्रहरीले अनावश्यक ज्यादती गरेको बताएका छन्। उनीहरुले सरकारलाई बदनाम गराउने काममा प्रहरी र प्रशासनले निरन्तर यस्ता गतिविधि गरेको भन्दै आपत्ति समेत जनाएका छन्।
पूर्वमन्त्री तथा नेकपा प्रदेश ३ का सचिव आनन्द पोखरेलले राष्ट्रिय कलाकार आस्था राउतले कमी कमजोरी महसुस गरिकेपछि पनि हिरासतमा राख्नु उचित नभएको भन्दै प्रक्रिया पूरा गरेर आजै हिरासतमुक्त गर्न माग गरेका छन्। दोलखाबाटै पटक पटक निर्वाचित भएका पोखरेलकै निर्वाचन क्षेत्रकी मतदाता हुन् आस्था राउत। पोखरेलले आस्था राउतको गल्ती थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने तहको नभएको भन्दै प्रहरी प्रशासनले विवेक र्पुयाउनुपर्ने बताएका छन्।
त्यस्तै नेकपा सांसद तथा अनेरास्ववियुकी पूर्व अध्यक्ष नविना लामाले पनि आस्था राउतमाथि प्रहरीले अन्याय गरेको भन्दै माफी मागिसकेपछि हिरातसमा राख्नुले पटक पटक सरकारलाई बदनाम गराउने काम प्रहरीबाट भएको टिप्पणी गरेकी छन्। नेकपा केन्द्रीय सदस्य तथा युवा संघका अध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटाले पनि आस्था राउतलाई माफी मगाएरसम्झाएर घर पठाउनुपर्ने भन्दै प्रहरीले आस्थामाथि उठाएको कदममा सहमत हुन नसक्ने बताएका छन्।
सापकोटा फेसबुकमा लेख्छन् ‘जसरी आस्था राउतको उत्ताउलोपनसँग सहमत हुन सकिएन त्यसैगरि पुलिसको आस्थामाथिको अतिमा सहमत हुन सकिन्न। उनको उत्ताउलोपनको माफी मगाएर, सम्झाएर घर पठाऊ।
गायिका आस्थालाई ब्लु अस्पतालमा रेखाले मध्यरात भेटेर फर्केपछि लेखिन यस्तो स्टाटस
लोकप्रिय तथा चर्चित नायिका रेखा थापाले राति नै गायिका आस्था राउतलाई भेटेकी छन् । प्रहरीसामु ‘आत्म समर्पण’ गरेकी गायिका आस्था राउतलाई हिरासतमा लिएर त्रिपुरेश्वरस्थित ब्लु क्रस अस्पताल लगिएको छ । नायिका रेखा थापाले गायिका राउतलाई अस्पतालमै पुगेर भेटेकी हुन् ।
अस्पतालबाट फर्केपछि मध्यरातमा १२ बजे मिनेट जाँदा उनले भावुक स्टाटस लेखेकी छन् । उनले भनेकी छन्, ‘आस्था राउत प्रहरी हिरासतमा रहेको र उनले प्रयोग गरेका अभिव्यक्तिबारे सबैजसोलाई थाहा छ ।
उनकै शब्दमा समग्र प्रहरी संगठनप्रति पर्न गएको अमर्यादाबारे भुल स्वीकार पनि गरेकी छन् । यसबाहेक आस्था एक नागरिक पनि हुन् र उनले सेवा प्रवाहमा गरिने व्यबहारबारे सुधारको लागि आक्रोशित भएको देखिन्छ ।
व्यक्ति, नागरिक र पदाधिकारी जो भएपनि मानवीय व्यवहार र असन्तुष्टि पोख्ने ठाउँ नै यस्तै सार्वजनिक स्थलहरु हुने गर्दछन् । यसलाई ठूलो बिषय र संस्थाप्रतिको आक्रमण नठानी एउटा सेवाग्राहीको जानअञ्जान आक्रोशको रुपमा लिएर यथाशीघ्र हिरासत मुक्त गर्नु पर्दछ ।’
नायिका थापाले भनेकी छन्, ‘यसबाट हामी सबैले सकारात्मक पाठ सिक्नु पर्छ र सुधार हुने अवसर ठान्नु पर्छ । आस्थाले नियोजित अप राध होइन । भुल र आक्रोशमा अपशब्द बोलेको रुपमा लिनु पर्छ ।
राउतलाई अस्पतालको चौथो तल्लाको ४२३ नम्बर बेडमा राखेर उपचार भैरहेको स्राेतले बताए ।
आस्थालाई सोमबार बिहान प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि सरकारी वकिलको कार्यालय लगिएको थियो । त्यसपछि उनलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले गायिका आस्था राउतलाई ४ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ ।
राउतमाथि अभद्र व्यवहारको मुद्दा दर्ता गरेको प्रहरीलाई सोहीअनुसार आस्थालाई पक्राउ गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुमती दिएको हाे ।
यस्ताे छ रेखा थापाकाे 'फेसबुक स्टाटस' :
आस्था रावत प्रहरी हिरासतमा रहेको र उनले प्रयोग गरेका अभिब्यक्ती बारे सबैजसो लाई थाहा छ । उनकै शब्दमा समग्र प्रहरी संगठन प्रती पर्न गएको अमर्यादा बारे भुल स्विकार पनि गरेकी छन । यस बाहेक आस्था एक नागरिक पनि हुन र उनले सेवा प्रबाहमा गरिने व्यबहार बारे सुधारको लागि आक्रोसित भएको देखिन्छ । ब्यक्ती नागरिक र पदाधिकारी जो भएपनी मानविय व्यबहार र असुन्तुष्टी पोख्ने ठाउँ नै यस्तै सार्वजनिक स्थलहरु हुने गर्दछ । यसलाई ठुलो बिषय र संस्था प्रतिको आक्रमण नठनी एउटा सेवाग्राहिको जान अन्जान आक्रोसको रुपमा लिएर यथासिघ्र हिरासत मुक्त गर्नु पर्दछ । यस बाट हामी सबैले सकारात्मक पाठ सिक्नु पर्छ र सुधार हुने अबसर ठान्नु पर्छ । आस्थाले नियोजित अपराध होइन भुल/आक्रोसमा अपशब्द बोलेको रुपमा लिनु पर्छ । यस्ता घटना धेरैका वास्तविक जीवनमा घटेका हुन्छन र कैयन सार्वजनिक हुँदैनन । सिक्दै जाने क्रममा समाज पनि सुधार हुँदै जाने भएकोले यसलाई कानुनी र प्रशासनिक बिषय मात्रै
बनाउनु हुँदैन ।